प्रत्येक्षदर्शीले खोले घटना हुनुको रहस्य, टिकटक बनाउन कर्णालीबाट तीन जनाले हा म फा ल्दा (भिडियो) – Khabar Silo
Posted on April 12, 2021 April 12, 2021 Author khabar silo Comment(0)
Posted on May 26, 2020 May 26, 2020 Author khabar silo
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका ९० जना कोरोना संक्रमितमा प्रदेश ५ का मात्रै ३८ जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ५ को कपिलवस्तुमा २६, बाँकेमा ७, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा २/२ र रुपन्देहीमा एक जना संक्रमित थपिएका हुन्। योसँगै प्रदेश-५ मा कूल संक्रमितको संख्या ३ सय ३१ पुगेको छ। सोमबार कूल संक्रमितको संख्या […]
कृपया अब हामी बुद्ध एयरको उडान नं. ६०१ बाट पोखरा प्रस्थान गर्दैछौँ । बाह्र हजार फिटको उचाइबाट २५ मिनेटको यात्रापछि पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुनेछौँ ।यात्रु म,हानुभावहरु ध्यानदिनुहोला ! “कोभिड–१९ को ,म,हा,मा,रीबाट सुरक्षित रहनका लागि हवाई यात्रामा पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा निर्देशन” कृपया आफ्नो सिटबेल्ट बाँ,धिदि,नु होला, यात्रा अवधिभर मास्क र फेससिट लगाउनुहोला । उडानका बेला हिँडडुल […]
साढे २ महिनाभित्र चीनले १८ अर्ब डलरको मेडिकल सामग्री निर्यात गर्‍यो
कोरोना महामारीको सुरुवात भएको देश चीन अहिले सामन्य अवस्थामा फर्किएको छ। चीनका कयौं सहरमा जनजीवन सामन्य भइसकेको,उद्योगधन्दा सुचारु भएका छन्। उत्पादन सुचारु भएसँगै चीनले मेडिल सामग्री उपत्पादन तथा निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको उत्पादन र निर्यातलाई चीनले तीब्रता दिएको छ। चिनियाँ सरकारी समाचारपत्र पिपुल्स डेली […]